I-La Maisonette ibuyiselwe ngothando eduze nesonto elidala. Uphahla oluphezulu lunikeza ukukhanya kwemvelo okuhle kakhulu futhi lugqamisa inhlanganisela esesitayeleni yokuphila kwesimanje enezici eziningi zoqobo zokwakha. Ikotishi lihlala ngemuva kwendlu yokulala lapho ithrekhi yeminyuzi yasendulo ingena emahlathini ngemuva. Ihlathi lingajatshulelwa ngenxa yobuntofontofo bengadi njengoba izivakashi zingalindela ukubona izilwane zasendaweni kuyilapho zokosa endaweni evulekile. Ikotishi linikeza ukubukwa okumangazayo kwesigodi lapho amakhaya kanye nemizana ehlala ezindaweni ezikude.
ILa Maisonette igcwele amagumbi okulala amabili. Inkosi inikeza ithuba lombhede wewele noma kabili. Futhi singangeza umbhede uma siceliwe. Leli gumbi linikeza ukufinyelela okuqondile engadini nasehlathini elingaphesheya. I-double yesibili ibonakala ngezingodo zayo eziveziwe, amatshe kanye ne-mezzanine.
Ikhishi elinefenisha ephelele lihlanganisa ukuhlala okunesitayela nokuvulekile nokuthinta okuningi kwe-rustic. Ifakwe kahle futhi ilungele ukudla komndeni. Idizayini yepulani evulekile ihlanganisa igumbi lokuhlala eliphelele elinombhede osofa ababili kanye ne-mezzanine enkulu.
Igumbi lokugezela liyi-chic, ligcwele indawo yokugezela yamandla, i-bidet nazo zonke izinto ezibalulekile.
Ngenkathi ingadi engemuva ibheke phezu kwehlathi, ithala elingaphambili linikeza indawo yokuhlala embozwe enokubukwa ngaphezulu kwe-hamlet kanye namadwala amangalisayo ngale. Mhlawumbe isici esixakile isifanekiso esithi 'The Black Madonna di Oropa', lapho i-La Maisonette yakhelwe khona nxazonke.
Sifuna izivakashi zizizwe zisekhaya ngokuphelele futhi sikukhuthaze ukuthi ujabulele zonke izinsiza zethu.
I-Fontainemore iyindawo eyigugu engakatholwa futhi unyaka wonke, indawo ephelele yokubalekela iqoqo futhi ujabulele okuhlangenwe nakho kwangempela kwe-Valdostana. Indawo yayo engasemfuleni enhle yenza isisekelo esihle sokuhlola isigodi saseGressoney, esikhulu kunazo zonke esifundazweni. Isikhungo esingokomlando sizizwa singaphelelwa yisikhathi njengoba iLys iwela ngaphansi kwePonte Romano emangalisayo ohambweni lwayo lwehla lusuka ezingqwembeni ezimangalisayo ze-Monte Rosa. Eduze kwesonto kanye ne-plaza ingxoxo yasePatois isazwakala ngenhla kwamadolobhana imithombo eminingi. Kusukela lapha, izinkulungwane zezindlela zasendulo zixhuma imizi eseduze nezakhiwo ezimangalisayo - I-Sanctuary of Madonna della Guardia, Ponte di Moretta - kanye nomklamo wenganekwane - izindlu ezakhelwe edwaleni noma ezihlala phezu kwezingongolo ‘zekhowe’. Uhambo olude ludlula 'imizi yezipoki', izimfunda eziphakeme kanye nezindawo ezinhle ze-alpine. I-Monte Mars Reserve eseduze kanye ne-Pian de Coumarial zinikeza ukushushuluza kwe-back-country okuhamba phambili, izicathulo zeqhwa, ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni kuso sonke isifunda. Thina mathupha sihlanganise incwadi yazo zonke izihambeli zethu ezoba setafuleni lapho ufika. Encwadini yethu sihlanganise imizila yethu yohambo eqashisayo engaphezu kuka-25. Sithemba ukuthi inikeza amaviki okuzijabulisa okuhlukahlukene unyaka wonke.
Sihambe kahle kakhulu futhi sihlale sijabule ukuhlangana nabantu abasha abavela ezindaweni ezintsha. Izehlakalo ezinjalo futhi zisenza sikwazi ukuqonda kangcono izifiso zabavakashi bethu - noma ngabe ubumfihlo obugcwele noma ithuba lokuhlanganyela empilweni yasendaweni.
Ngaphezu kwalokho, sixhumeke kahle kakhulu futhi sijabule ukuhlela izinsiza eziphelele zokuqondisa cishe nganoma yimuphi umsebenzi ongacatshangwa; siphinde sijabule ngokulinganayo ukuhlinzeka ngolwazi lwamahhala, olungachemi kanye nolujulile kwabacabanga ngokuzimela. Esikukhathaza kakhulu ukuthi ujabulele isifunda kanye nokungenisa izihambi kwethu ngokugcwele.
Sihambe kahle kakhulu futhi sihlale sijabule ukuhlangana nabantu abasha abavela ezindaweni ezintsha. Izehlakalo ezinjalo futhi zisenza sikwazi ukuqonda kangcono izifiso zabavakashi…